यस्ता विशेषता भएका मान्छे हुन्छन् भाग्यमानी, तपाईमा छ त ? - Public 24Khabar
Home Lifestyle यस्ता विशेषता भएका मान्छे हुन्छन् भाग्यमानी, तपाईमा छ त ?
हरेक मानिसको शरीरिक बनावट फरक हुन्छ ।
फरक–फरक बनावट र संकेतले व्यक्तिको विशेषताबारे पनि बताइरहेको हुन्छ । विशेष गरी समुद्रशास्त्रले यस्ता कुराको विशेषता बताइरहेको हुन्छ । शास्त्रका अनुसार शरीरमा भएका यी संकेतहरुले तपाईको बारेमा निम्न कुराहरु बताउँछन् ।
Previous article10 सँसार च’कित पार्ने अ’चम्मका जोडिहरु, मायाँ भनेको यस्तो पो हुनुपर्छ। amazing couple in the world (भिडियो हेर्नुहोस)
Next article३ फिटका गोपीले भित्र्याए ६ फिटकि अग्लि सुन्दरी, जेठि छाडेपछि चिट्ठा पर्यो (हेर्नुस् भिडियो)